CeleLove - Page6of 228 - Welcome From Cele Love
ချိုင်းမည်းတာနဲ့ အနံ့ဆိုးထွက်နေတာတွေကို ပျောက်စေတဲ့ သဘာဝချိုင်းမွေးချွတ်နည်း (၄)မျိုး
ချိုင်းမည်းတာနဲ့ အနံ့ဆိုးထွက်နေတာတွေကို ပျောက်စေတဲ့ သဘာဝချိုင်းမွေးချွတ်နည်း (၄)မျိုး မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ အလှအပကအရေးကြီးသလို တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ လူတွေကြားထဲ ကိုယ်သင်းနံ့လေးမွှေးပျံ့မနေဘူးဆိုရင်တောင် ခန္ဓာကိုယ်က အနံ့ဆိုးတွေထွက်မနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ်က အနံ့ဆိုးတွေ မထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ချိုင်းကို သန့်နေအောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချိုင်းမွေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချိုင်းမည်းနေတာကိုဖြူစေတဲ့အပြင်၊ အနံ့ဆိုးတွေမထွက်အောင်ပါ […]
ရန်ဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို လုံးဝ မပြောသင့်၊မလုပ်သင့်တဲ့အရာ(၈)ခု
ရန်ဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို လုံးဝ မပြောသင့်၊မလုပ်သင့်တဲ့အရာ(၈)ခု ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်လို့၊ခင်လို့ လက်တွဲကြတယ်ဖြစ်စေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနိုင်လို့ စုံတွဲတိုင်း အနည်းနဲ့အများတော့ ရန်ဖြစ်၊ စိတ်ကောက်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သဘောထား မတိုက်ဆိုင်လို့ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေး တာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်တွေဖော်၊ စကားလုံး ရင့်ရင့်သီးသီးတွေ သုံးပြီး စိတ်နာသွားအောင် […]
နေပြည်တော်တွင် အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထပ်မံပြုကျင့်ခံရ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့ တဲကုန်းရွာတွင် အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် တဦးကို ဆွေမျိုးတော်စပ်သည့် အမျိုးသားတဦးက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပျဉ်းမနား မြို့မ ရဲစခန်းမှ […]
ကွာရှင်းမှုအပေါ် ရင်ဖွင့်လာတဲ့ F4 မင်းသမီးလေး Ku Hye Sun
ကွာရှင်းမှုအပေါ် ရင်ဖွင့်လာတဲ့ F4 မင်းသမီးလေး Ku Hye Sun လက်ရှိ တောင်ကိုရီးယားမှာ ဂယက်ထဆဲဖြစ်တဲ့ သတင်းကတော့ Ku Hye Sun နဲ့ Ahn Jae Hyun တို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ကို မကွာရှင်းဖို့ ပြောဆိုကြတဲ့ […]
လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သံဓါတ်အားနည်းတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ (၄)မျိုး
လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သံဓါတ်အားနည်းတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ (၄)မျိုး သံဓာတ်ဟာ သွေးနီဥထဲမှာရှိတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်စီဂျင်ကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရောက်အောင် သယ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သံဓာတ်အားနည်းတဲ့အခါမှာ မှတ်ဥာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ၊ သွေးအားနည်းရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ မကြာသေးခင်က သုတေသနပညာရှင်တွေက အတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သံဓာတ်အားနည်းတဲ့လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် မပေ့ါဆဘဲ သေသေချာချာကုသသင့်ပါတယ် နော် […]
ကွတ်ခိုင်မြို့ကို လက်နက်ကြီးများနှင့် တိုက်ခိုက်ဖို့လာတဲ့ သူပုန်အဖွဲ့ အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ခွေးပြေးဝက်ပြေး ထွက်ပြေးကြရ
ကွတ်ခိုင်မြို့ကို လက်နက်ကြီးများနှင့် တိုက်ခိုက်ဖို့လာတဲ့ သူပုန်အဖွဲ့ အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ခွေးပြေးဝက်ပြေး ထွက်ပြေးကြရ AA ၊ TNLA ၊ MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ကွတ်ခိုင်မြို့အား အဝေးမှလက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရန် ချဉ်းကပ်လာသဖြင့် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့် အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြောင်းသိရသည် … ။ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နောင်ချိုမြို့နယ် သိန်းနီမြို့နယ်နှင့် […]
ပဲခူးတိုင်းတွင် ဖခင်ထံ ဟင်းသွားပို့သော အမျိုးသမီးအား သားမယားဖြင့်ပြုကျင့်ကာ လည်ပင်းညှစ်သတ်
ပဲခူးတိုင်းတွင် ဖခင်ထံ ဟင်းသွားပို့သော အမျိုးသမီးအား သားမယားဖြင့်ပြုကျင့်ကာ လည်ပင်းညှစ်သတ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံခါးမြို့နယ် ပဲနွယ်ကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင် သူဌေးကြီးကျေးရွာ သံပရာခုံအုပ်စု တွင် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအဝတ်ဗလာဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးနေစဉ်ကို တွေ့ရှိမှူတွင်သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကာ သတ်ဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ကစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် …. ။ ဖြစ်စဉ်မှာသံပရာခုံကျေးရွာအုပ်စု သူဌေးကြီးကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူ […]
ဦးကျော်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးဆေးရုံတင်ထားရတယ်တဲ့… နိုင်ငံကျော် ဝါရင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ကျော်သူ ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရသူပါ …. ။ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားများစွာ ကြောင့် သူ့ကို ခုချိန်ထိ ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ ပဲ …. ။ ကျော်သူ က အနုပညာလောကတွင်သာမက သာရေးနာရေး […]
ဂုတ်တွင်းမှာ ပိတ်မိနေလို့ စားရိတ်ပြတ်လုမတတ် ဖြစ်နေတဲ့ ကားသမားတွေအပေါ် ရိုက်ချက်ပြင်းလှတဲ့ ထမင်းဆိုင်…. မိုးလေးတဖွဲဖွဲကျနေတဲ့မနက် အာရုံတက်မှာ ဂုတ်တွင်းပတ်ပတ်လည်တွင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် 3ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့ အပြန်အလှန် ပစ်ခက် တိုက်ခိုက်နေ၍ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ သွားလာ၍မရဖြစ်နေသည် …. ။ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကားဆရာများဒုက္ခရောက်နေချိန် မိုးမြင့်သာထမင်းဆိုင်သည်သာ ကားဆရာများနှင့် […]
« 1 …567… 228 »